Home 1 | Myanmar Financial Intelligence Unit
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ် (၁/၂၀၂၀) ကျင်းပပြုလုပ်မှု
/ 20 နိုဝင်ဘာလ 20 /0comments
Holding the Anti-Money Laundering Central Board Meeetig ( 1/2020 )
National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Committee – NRA Committee Activity(10)
/ 29 သြဂုတ်လ 20 /0comments
National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Committee – NRA Committee Activity(9)
National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Committee – NRA Committee Activity(8 )
National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Committee – NRA Committee Activity(7)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ ထံမှပေးပို့သည့် သတင်းပို့ချက်များကို လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ ကိုလည်းကောင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်း၊ စိစစ်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင် သောပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယရှိသည့်အခါ စိစစ်တွေ့ရှိ ချက်ရလဒ်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ဆောလျင်စွာ ပေးအပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့်အညီ ပေးအပ်ခြင်းများကို လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သော ဗဟိုအဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကို တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးနည်းဥပဒေများအရ ၂၀၀၄ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေကို အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲပြီး ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်း ထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ ဖြင့်အပ်နှင်းထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီး နှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကို ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရွက်ရန်၂၀၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်အမှတ် ၃/၂၀၁၆ ဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ငွေကြေးဆိုင်ရာမှုခင်းတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏မျော်မှန်းချက်ခံယူချက် (Vision) မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့မှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အဆိုပါမျော်မှန်းချက်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ (Mission) ကို ချမှတ်ထားရှိ ပါသည်- (က). နိုင်ငံတော်ကလက်ခံထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်။ (ခ). ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာမူလပြစ်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွားပေါ်ပေါက်နိုင်သည့် ပြစ်မှုများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန်။ (ဂ). အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ငွေကြေးပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်။ (ဃ). ဖျက်အားပြင်းလက်နက်များပြန့်ပွားရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ကာကွယ် ဟန့်တားရန်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ငွေကြေးပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရန်။ (င). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။ (စ). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုများ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
၅။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ ရည်မှန်းချက်များ (Objectives)ကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်- (က). သတင်းပို့ပုံစံများ၊ နည်းလမ်းများချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ သတင်းပို့ချက်များအား လက်ခံရယူရန်နှင့် စုဆောင်းထိန်းသိမ်းထားရှိရန်။ (ခ). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်မှုအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ်နယ်ပယ်အလိုက် ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်ရန်။ (ဂ). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ၊ ကဏ္ဍများနှင့် အလားအလာများအား စိစစ်သုံးသပ်ရန်။ (ဃ).ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်သည်ဟု သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိသည့် စိစစ်ချက်ရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း ပြည်ပမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုလာပါက စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် အညီ ဖြန့်ဝေရန်။ (င). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုတို့နှင့်ဆက်နွယ် မှုကို စိစစ်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်ထပ်မံလိုအပ်ပါက သတင်းအချက် အလက်ကို ရရှိနိုင်မည့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရဌာနနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း များထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းခံရယူရန်။ (စ). ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက် ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။ (ဆ). သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက် ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် အသိပညာ ဖြန့်ဝေရန်။
၆။ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်များ (Functions) မှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က). သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများထံမှ သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းပို့ချက်များ၊ အခြားသတင်းပို့ ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံခြင်း။; (ခ). လက်ခံရရှိသည့် သတင်းပို့ချက်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။ (ဂ).လက်ခံရရှိသည့်သတင်းပို့ချက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် မူလပြစ်မှုများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိအတွက် မိမိဌာနတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရရှိသည့်သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပြင်ပရင်းမြစ်များမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်စိစစ်ခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်၊ အလားအလာနှင့် နည်းလမ်းများကို စိစစ် သုံးသပ်ခြင်း။ (ဃ). စိစစ်ချက်အရ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် စပ်ဆိုင် သည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသော ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုသော်လည်းကောင်း၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိပါက စိစစ်တွေ့ရှိချက်ရလဒ်ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများထံ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဖလှယ်ခြင်း၊ ထပ်မံလိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် များကို တောင်းခံခြင်း။ (င). ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် အမှုကိစ္စရပ်များ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ (စ). နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ၊ နည်းပုံစံများ၊ အလားအလာများကို သတင်းဖလှယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ (ဆ).ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဌာနများ၊ အခြားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်း များနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း။
၇။ မြန်မာနိုင်ငံ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်ကလက်ခံထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာမူလပြစ်မှုများကို ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရန်နှင့် ဆင့်ပွားပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ပြစ်မှုများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အမျိုးသားအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။